အတက်ရောဂါ အတွက် အရေးကြီး ကာကွယ်ကုသမှုများ - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေးစင်တာ » အာရုံကြောရောဂါများအကြောင်း » အတက်ရောဂါ အတွက် အရေးကြီး ကာကွယ်ကုသမှုများ
အတက်ရောဂါဆိုတာ ဦးနှောက်ရဲ့ ပုံမှန်လုပ်ဆောင်မှု ပျက်စီးတဲ့အခါ ဖြစ်တတ်တဲ့ ဦးနှောက်မူမမှန် လက္ခဏာရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ လူတစ်ယောက်ကို လဲကျစေ, ကတုန်ကယင်ဖြစ်စေပြီး လက်ရှိဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာ မသိနိုင်လောက်အောင် အာရုံကို ပျက်ယွင်းစေပါတယ်။
အောက်ပါတွေကတော့ အတက်ရောဂါ အတွက် အရေးကြီး ကာကွယ်ကုသမှုများ ဖြစ်ပါတယါ။
၁။ အတက်ရောဂါကိုဘယ်လို တားဆီးနိုင်သလဲ?
– ကိုယ်ဝန်နှင့်ကလေးမွေးဖွားချိန်မှာ တက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်နှင့်ကလေး ကျန်းကျန်းမာမာ ဖြစ်စေဖို့ကိုယ်ဝန်ဆောင်စောင့်ရှောက်မှုလမ်းညွှန်ချက်တွေ အတိုင်းလိုက်နာရန်အရေးကြီးပါတယ်။
– ဦးနှောက်ဒဏ်ရာဟာ အတက်ရောဂါအဖြစ် အများဆုံးအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။ အားကစားလုပ်နေစဉ် သို့မဟုတ် ကားမောင်းနေစဉ်ဦးနှောက်ဒဏ်ရာရခြင်းကို တားဆီးဖို့အတွက် ခမောက်သို့မဟုတ်လုံခြုံပစ္စည်းကိရိယာများဝတ်ဆင်ပါ။
သွေးတိုးခြင်းနှင့် ကူးစက်ရောဂါတွေကလည်း အတက်ရောဂါဖြစ်ဖို့ ဦးနှောက်အပေါ်သက်ရောက်မှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောပုံမမှန်မှုတွေက်ု သေချာအောင်ကုသပါ။
– အတက်ရောဂါဟာ လေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါ၏ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရောဂါကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့တတ်နိုင်သမျှလေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါ၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချဖို့ကြိုးစားပါ။
– ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းဖြင့်လည်း ဒီရောဂါကို တားဆီးနိုင်ပါတယ်
-သင်ရဲ့ လက်ကိုဆေးကြောခြင်းနှင့်အစားအစာသန့်ရှင်းအောင် ပြင်ဆင်ထားရန်လိုပါတယ်။
၂။ အတက်ရောဂါကို ဘယ်လိုကုသနိုင်သလဲ။
ကုသမှု များစွာရှိသော်လည်း, အသုံးအများဆုံးမှာ
သင့်မှာ အတက်ရောဂါရှိရင် သင်၏ဆရာဝန်ကဦးနှောက်ထဲမှာ ရောဂါပြန့်ပွားမှု ကန့်သတ်ရန် Anti – seizure ဆေးဝါးများသတ်မှတ်ပေးပါလိမ့်မယ်။ လုနာအများစုကတော့ ဆေးရဲ့ ရောဂါပေါ်သက်ရောက်မှုကို တွေ့ကြပါတယ်။
ခွဲစိတ်ကုသတယ်ဆိုတာ သင်၏အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည့်အလားအလာရှိသော ဦးနှောက်ဧရိယာများကို အတက်ရောဂါပြန့်ခြင်းအတွက် လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ ဆေးဝါးများနှင့် ရောဂါထိန်းချုပ်မှု ပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ခွဲစိတ်မှု အသေးစားတွေ လုပ်ကြပါတယ်။
– ဆေးဝါးများနှင့်ခွဲစိတ်မှုတွေက အလုပ်မလုပ် လျှင်, သင့်အနေနဲ့ အာရုံကြောနှိုးဆွနည်း , ketogenic အစားအစာစားခြင်းလို အခြားရွေးချယ်စရာတွေ သုံးနိင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့အတက်ရောဂါကို ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲနိုင်သလဲ?
ကိုယ်တိုင်ဂရုစိုက်ဖို့က အတက်ရောဂါကို စီမံခန့်ခွဲဖို့အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်
– သင့်မှာ မေးခွန်းမေးစရာ ရှိသည့်အခါသင့်ဆရာဝန်သို့မဟုတ်သူနာပြုနှင့် ဆွေးနွေးပါ။
– မတက်မီက ဘာလုပ်နေခဲ့တယ် အတက်ရောဂါရပ်သွားအောင် ဘာလုပ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့
အတက်ရောဂါ အကြောင်း အရေးကြီးအချက်အလက်များ
– ဝက်ရူးပြန် အတက်ရောဂါရှိသူတွေဟာ မရှိသူတွေ လုပ်နေကြ အလုပ်တွေကို လုပ်နိုင်ပါတယ်။
အသက် 65 ကျော်လူတွေမှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်စတင်အတက်ရောဂါဖြစ်နိုင်ချေဟာ ကလေးတွေနဲ့ တူတူပါပဲ။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက် ဝက်ရူးပြန်မှုဟာလေဖြတ်ခြင်းနှင့်နှလုံးရောဂါများကဲ့သို့အခြားကျန်းမာရေးပြဿနာများရဲ့ အကျိုးဆက် ဖြစ်ပါတယ်။
– ဒီရောဂါဟာ နာတာရှည်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပြဿနာပါ။ လူအချို့ အောင်မြင်စွာကုသနေကြပေမယ့်ကုသမှုက လူတိုင်း အတွက်အလုပ်မလုပ်ပါဘူး။
– seizure ကြောင့် သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါကြောင့် သေတာ မကြာခဏ မဖြစ်ပျက်ပါဘူး။ ဝက်ရူးပြန်ရောဂါဟာအလွန်ဆိုးသော်လည်း seizure ကြောင့် သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။
– ဝက်ရူးပြန်ရောဂါဟာ ကူးစက်တတ်တဲ့ ရောဂါမဟုတ်ပါ။ သင့်အနေနဲ့ အခြားတစ်ယောက်ဆီက အတက်ရောဂါ မကူးနိုင်ပါ။
သင် ရောဂါဖြစ်စဉ်အတွင်းသင်၏လျှာမျိုကျသွားတာမျိုးတွေ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ ဒါဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။
ကိုယ်ဝန်ရရှိခြင်း, ကိုယ်ဝန်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း, မိခင်ကျန်းမာရေး, ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း
သင့်အရိုးသန်မာစေဖို့ ဒါတွေ ရှောင်ကြဉ်ကြပါစို့ ။ ။